Ex minister joins Mujuru, faces parly recall – Zimbabwe Daily
Ex minister joins Mujuru, faces parly recall
ZIMBABWE – The Zanu PF Manicaland provincial leadership has unanimously recommended that Chimanimani legislator, Engineer Munacho Mutezo be recalled from Parliament for joining the People First project.
Presenting the Chimanimani situational party report during the Zanu PF Manicaland Provincial Coordination Committee meeting in Mutare, Zanu PF provincial executive member, Cde Cruiswell Mugombe narrated how Engineer Mutezo and Councillor Joseph Zviuya are no longer serving the interests of the party.
Engineer Mutezo, a former Energy minister, is alleged to be the kingpin of recruiting and financing the People First project in Chimanimani District while Councillor Zviuya has openly acknowledged he has defected.
Politburo member, Cde Oppah Muchinguri and Provincial Chairman, Dr Samuel Undenge concurred that there are serious problems in Chimanimani which should be urgently resolved.
Meanwhile, the Zanu PF Manicaland provincial leadership joined the First Family in celebrating President Robert Mugabe’s 92nd birthday anniversary in style through song and dance, during the Provincial Coordination Committee meeting.
ZIMBABWE - The Zanu PF Manicaland provincial leadership has unanimously recommended that Chimanimani legislator, Engineer Munacho Mutezo be recalled from Parliament for joining the People First project. Presenting the Chimanimani situational party report d...